अमेरिकाी सैन्य जहाजमा विस्फोटपछि भिषण आगलागी –
अमेरिकाी सैन्य जहाजमा विस्फोटपछि भिषण आगलागी
एजेन्सी, सान डिएगोस्थित अमेरिकाकी जलसेनाको बेसमा रहेको सैन्य जहाजमा भएको विस्फोट र आगलागीमा २१ जना घाइते भएका छन् । अमेरिकी जल सेनाका अधिकारीहरुका अनुसार घाइते हुनेमा १७ जना जहाजका कर्मचारी तथा ४ जना सर्वसाधारण रहेका छन् । उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
लेफ्टिनेन्ट कमान्डर प्याट्रिसिया क्रुजबर्गरका अनुसार ‘युएसएस बोनहोम रिचार्ड’ का घाइते नौसेनाहरुको अवस्था सामान्य रहेको छ । अमेरिकी समयअनुसार आइतबार बिहान भएको आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न अग्निनियन्त्रकहरु घटनास्थलमा पुगेका थिए ।
के कारणले आगलागी भयो भनेर अझै खुल्न नसकेको सीएनएनले जनाएको छ । तर, सुरुवाती जानकारी अनुसार जहाजको वेल डेकबाट यो आगलागी सुरु भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । नौसेनाहरुले जहाज छाड्दै गर्दा विमानमा विस्फोट भएको सान डिएगोका अग्निनियन्त्रक प्रमुख कोलिन स्टोवेलले भने ।
आगलागी पछि नजिक रहेका दुईवटा जहाजलाई पर सारिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार युएसएस बोनहोम रिचार्ड एउटा युद्धक जहाज हो । घटना हुँदा जहाजमा १६० जना रहेका थिए ।
« सोमबार पनी अधिकांश स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना, कहाँ–कहाँ छ बाढी, पहिरो र डुबानको खतरा ?
कोरोना संक्रमणले डब्लुएचओ नै संकटमा »
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु कतीको जायज ?
प्रधानमन्त्रीले कीर्ते कागजका बनाएर प्रतिनिधिसभा विघठन गरे : रावल
नेपालमा आइतबार थप २७० जनामा कोरोना पुष्टि,७ जनाको मृत्यु
माघ १७ गते देखि ‘नबिल किताब जात्र’